Sidee baa Muqdisho looga dareemay xisbiga cusub ee madaxweyne Xasan Shiikh? - Caasimada Online
Home Warar Sidee baa Muqdisho looga dareemay xisbiga cusub ee madaxweyne Xasan Shiikh?
Sidee baa Muqdisho looga dareemay xisbiga cusub ee madaxweyne Xasan Shiikh?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Waxaa magaalada Muqdisho ka dhacday Munaasabad lagu daah furayo Xisbiga cusub ee Midowga Nabadda iyo Horumarka oo uu hoggaaminayo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Prof. Cabdiraxmaan Maxamed oo ah aqoon yahay ku takhasusay Cilmiga siyaasadda ayaa Shabakadda Caasimada Online u sheegay in Xisbigaan cusub uu u baahan yahay siyaasad adag si uu ugu guuleysto doorashada soo socoto maadaama uu sheegay inay jiraan Siyaasiyiin kale oo adag oo xisbiyo sameystay.